ယူဗင်တပ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့အပြီး သောမတ်စ် တူချယ်ရဲ့ ပွဲပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အပြည့်အစုံ - SPORTS MYANMAR
လက်ရှိ ချန်ပီယံလိဂ် ချန်ပီယံ ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဆင့် ပွဲစဉ် ၂ မှာ အုပ်စုဗိုလ်လုဖက် ယူဗင်တပ် အသင်း ကို တူရင်မြေမှာ တောင်ပံ ကစားသမား ဖက်ဒရီကို ခီယေဆာ ရဲ့ တလုံးတည်းသော သွင်းဂိုးနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ် ။ ထိုပွဲအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို အခုလိုပဲ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဒုတိယပိုင်း ၃ပုံ ၁ပုံမှာ ဘာကြောင့် လူစားလဲမှု ၃ခုဆက် လုပ်ခဲ့တာလဲ ?
” ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒီလို လူစားလဲမှုမျိုး ပုံမှန် အခြေအနေမှာ ကျွန်တော့ဆီက တော်ရုံ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အရန်ခုံ က အသင်းသားတွေကို ဒီပွဲမှာ အခွင့်အရေး ပေးချင်တဲ့ သဘောပါပဲ ။ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူစားလဲမှု ၅ကြိမ် အထိ ရရှိထားတာ ဖြစ်လို့ ၊ အရန် ကစားသမား တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချချင်ခဲ့တာပါ ။ “
” ကျွန်တော်တို့ဟာ အရန် အသင်းသားတွေ အပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိပြီး ၊ သူတို့ဆီကနေ ပိုပြီး လန်းဆန်း ဖြတ်လတ်မှု ရှိတဲ့ ကစားအားနဲ့ ပေးဆပ် ကစားပုံကို အလိုရှိခဲ့လို့ ၊ အခုလိုမျိုး လျှပ်တပြတ် လူစားလဲမှုတွေ ဆက်တိုက် လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ “
ဒီနေ့ပွဲကို ရှုံးခဲ့ခြင်း ဟာ မန်စီးတီးနဲ့ ရှုံးပွဲက အရှိန်ကြောင့်လား ?
” မဟုတ်ပါဘူး ။ မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲအပြီး ကျွန်တော်တို့ တရက် နားခွင့် ရခဲ့သလို ၊ မနေ့ကလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် ၂ခုကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် အတိုင်း ထက်မြက် လန်းဆန် နေခဲ့သလို ၊ နိုင်ပွဲ အတွက် ဆာလောင်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး ၊ မန်စီးတီးနဲ့ အရှုံးရလဒ် ကို ဒီပွဲမှာ ပြန်ချေပဖို့ ဆန္ဒ အပြည့် ရှိခဲ့ပါတယ် ။ “
” ခံစစ်ဇုန် အတွင်းထိ ပိတ်ကစားတဲ့ ပြိုင်ဖက် တသင်းကို တိုက်စစ် အရှိန် မြှင့်ပြီး ဖိကစားဖို့က ခက်ခဲပါတယ် ။ စီးတီးနဲ့ ပွဲကလို ကျွန်တော်တို့ ခံစစ်မှာပဲ စုပြုံနေမယ် ဆိုရင်လည်း ၊ တိုက်စစ် အတွက် ဘာ အခွင့်အရေးမှ ဖန်တီးပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ဒီသဘောတရား အတိုင်း သက်ရောက်နေပါတယ် ။ “
” စီးတီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကြား ကွဲပြားသွားခဲ့တာ က ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြိုင်ဖက်ကို အခွင့်အရေးကောင်း ၂ကြိမ် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခွင့် ပေးလိုက်တာပါ ။ စီးတီး ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို တည်ကန်ဘော က တဆင့် ရခဲ့တဲ့ လူထိ လမ်းကြောင်းပြောင်း သွင်းဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ “
” တခါတလေမှာ ခံစစ် အရမ်း ပိတ်တဲ့ အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင် ရစ်သမ် ရရှိဖို့ အတွက် ခက်ခဲတာကြောင့် ၊ ဒီလို ကံကောင်းတဲ့ သွင်းဂိုးမျိုး လိုပါတယ် ။ နောက်ပြီး တိုက်စစ် အတွက် တရစပ် မနားတမ်း အလုပ်လုပ်ပေး ၊ ပြေးလွှားပေးမယ့် ကစားသမားမျိုးလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး ။ “
” တခြား အရာတွေကို အာရုံစိုက်နေချိန် ၊ လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်တိုင် အမှား ကျူးလွန်ခဲ့မိပြီး ၊ ဒါက အသင်းရဲ့ ယုံကြည်မှု ကို တစိတ်တပိုင်း ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဂိုးပေါက် ကန်သွင်းတဲ့ ပြဿနာ … ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် က ဂိုးပေါက်ကို ကန်ဖို့ မကြိုးစားဘူး ဆိုရင် ဂိုးပေါက် က သူ့အလိုလို တည့်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ “
” ပြိုင်ဖက်ရဲ့ ခံစစ် အတွင်းထိ ပိတ်ဆို့ ကစားပုံကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဂိုးပေါက် ခြိမ်းခြောက်နိုင်ဖို့ အတော်လေး ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ် ။ နေရာလွတ် အနည်းနဲ့ အများ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သော်ငြားလည်း ဂိုးပေါက် တည့်ဖို့ မလွယ်ခဲ့ပါဘူး ။ ကန်ချက်တွေကတော့ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ် ။ “
” ဒါပေမယ့် ပွဲပြီးခါနီး တောက်လျှောက် ရခဲ့တဲ့ ဂိုးသွင်းခွင့်တွေက ဂိုးပေါက် တည့်မတ်ဖို့ အဲလောက်ထိ ခက်ခဲခဲ့မယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး ။ ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလို အသင်းရဲ့ ဂိုးပေးခဲ့ရ အပြီး မာမာထန်ထန် တုန့်ပြန်မှုမျိုး မြင်တွေ့ခဲ့ရတာကိုတော့ ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ် ။ ဒီနေ့ပွဲ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ၁၆ သင်း အဆင့် က အက်သလက်တီကိုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပွဲလိုမျိုးပါပဲ ။ ခက်ခဲတယ် ဆိုပေမယ့် ၊ ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သင့်ပါတယ် ။ “
ဒုတိယပိုင်း စစချင်း ၁၁စက္ကန့် အကြာ ပေးခဲ့ရတဲ့ဂိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမြင်သလဲ ?
” စိတ်ပျက်စရာပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဒီ ပေးဂိုး အပေါ် စိတ်ပျက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းထားခဲ့တဲ့ အတိုင်း ခက်ခဲတဲ့ ပွဲတပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ခင်ဗျား ဟာ ကွင်းလယ်မှာ အမှား လုံးဝ မရှိပဲ ကစားရမှာ ဖြစ်သလို ၊ မှန်ကန်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ အရဲစွန့် လှုပ်ရှားတာမျိုး လုပ်ရပါမယ် ။ “
” ဒီလို လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ခင်ဗျားမှာ ရစ်သမ်ကောင်း လိုသလို ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး ချနိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီနေ့ပွဲမှာ လန်းဆန်းနေခဲ့တယ်လို့ မခံစားခဲ့ရပါဘူး ။ မနေ့က လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်မှာတုန်းက ဒီလို မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး ။ “
” ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ သက်သေပြချက်တွေ လိုမယ် ဆိုရင်တော့ ၊ ပထမပိုင်း အတွင်း က နမော်နမဲ့ ဘောလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှု ၂ကြိမ်နဲ့ ဒုတိယပိုင်း စစချင်း ပေးခဲ့ရတဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက် ပေးဂိုးကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ “